အရေပြားကင်ဆာ - နေလောင်ဒဏ်ခံခြင်း - Hello Sayarwon
အရေပြားကင်ဆာ - နေလောင်ဒဏ်ခံခြင်း
Wathun Myat Chal မှ ရေးသားသည်။ 22/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လူအတော်များများက အသားအရောင်ရင့်တာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးရဲ့ လက္ခဏာလို့ သတ်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က နေပူစာ လှုံတာ၊ အသားအရောင်ရင့်တာ သဘောကျတဲ့သူဆိုရင် သင့်မှာ အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ များနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားကင်ဆာ အပါအဝင် ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားဖို့ နေရောင်ခြည်နဲ့ အလွန်အကျွံထိတွေ့မှုရဲ့ ထိခိုက်မှုတွေကို သိထားရပါမယ်။
အရေပြားကင်ဆာဟာ နေပူစာလှုံတာကို အတော်မက်မောတဲ့ လူတွေရှိတဲ့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ အဖြစ်များဆုံး ကင်ဆာပုံစံလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အရေပြားကင်ဆာဟာ အကျိတ်တွေရဲ့ ဆဲလ်တွေ အထိန်းအကွပ်မဲ့ ကြီးထွားလာတာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ အဲ့ဒါက ကင်ဆာမဟုတ်တာ (Benign) သို့မဟုတ် ကင်ဆာ (Malignant) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေပြားကင်ဆာကို အဓိကဖြစ်စေတာ နေရဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်က အရေပြားအမျှင် (Elastin) ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ပေါက်ပြဲစေတာကြောင့်ပါ။ Elastin ဆုံးရှုံးတာရဲ့ ပထမဆုံး လက္ခဏာကတော့ အရေပြား ရော့ရဲလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြင်းထန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အရေပြားဟာ အလွယ်တကူ အနာတရ ရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို နေလောင်တာလို့ လူသိများပါတယ်။
နေလောင်တယ်ဆိုတာ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ဘာအကာအကွယ်မှ မပါပဲ အတော်ကြာကြာနေတဲ့သူတွေမှာ အလွယ်တကူ မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။ တကယ်လို့ သင့်အရေပြားက ပန်းရောင် သို့မဟုတ် အနီရောင်ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိရင် ဒါက နေလောင်တဲ့ လက္ခဏာပါ။ ပိုပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေမှာ နေလောင်တဲ့နေရာတွေကနေ အရည်ကြည်ဖု ထွက်တာတွေ၊ အရေပြား ကွာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေရဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်က သင့်အရေပြားဆဲလ်မှာရှိတဲ့ DNA ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ပျက်စီးတာ များလာတဲ့အခါ ဆဲလ်တွေက စတင်ပြီး အထိန်းအကွပ်မဲ့ ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်စေလာနိုင်ပါတယ်။
နေရောင်ခြည်ကနေ ကျွန်တော်တို့ အရေပြားကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ။
အရိပ်အောက်မှာ နေပါ – Lightening Treatment လုပ်နေစဉ်မှာ ထီးဆောင်းတာ၊ အပင်ရိပ် သို့မဟုတ် တခြားအရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ခိုနားခြင်းက သင့်အရေပြား ပျက်စီးခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
နေပူခံလိမ်းဆေးလိမ်းခြင်း – နေရောင်ခြည်ကာကွယ်ခြင်း အညွှန်းကိန်း (SPF) ၃၀ နဲ့ အထက်၊ UVA နဲ့ UVB ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နေပူခံလိမ်းဆေးကို အသုံးပြုပါ။ သင့်ကို ချွေးထွက်စေတဲ့ အိမ်အပြင်က အလုပ်တွေလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေကူးပြီးနောက်၊ နေရောင်အောက်မှာ ၂နာရီထက်ပိုပြီး နေရရင် နေပူခံလိမ်းဆေး ထပ်လိမ်းပါ။ ဒါ့အပြင် လိမ်းဆေးရဲ့ သက်တမ်းကုန်မယ့်ရက်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ သက်တမ်းကုန်မယ့်ရက်မပါတဲ့ လိမ်းဆေးတွေမှာ ၃နှစ်ထက် မပိုတဲ့ အရည်အသွေးသက်တမ်း ပါတတ်ပါတယ်။ အပူချိန်များတဲ့နေရာမှာ ထားရင် အဲ့သက်တမ်းက ပိုလျော့ကျသွားမှာပါ။
သင့်တော်တဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ ဦးထုပ်ကို ရွေးချယ်ခြင်း – အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်ခြင်းက အရေပြားကို ကာကွယ်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ နောက်ထပ် ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချည်နဲ့ ရက်လုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျ ီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်တွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒီအဝတ်အစားတွေက နေရောင်ခြည်ရဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှု ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိုတဲ့ တီရှပ်တွေက ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာ ခြောက်တဲ့ တီရှပ်တွေထက် လျော့နည်းပါတယ်။ အရောင်ရင့်တာက အရောင်နုတာထက် ကာကွယ်မှု ပိုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျက်နှာ၊ ဦးခေါင်း၊ နား နဲ့ လည်ပင်းတို့ကို အရိပ်ရဖို့ လျှာထိုးကြီးကြီးနဲ့ ဦးထုပ်ကို ဆောင်းသင့်ပါတယ်။ canvas လိုမျိုး ချည်သားတွေက သင့်အရေပြားကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေကနေ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နေရောင်ခြည် ဖောက်ဝင်နိုင်တဲ့ အပေါက်တွေပါတဲ့ ကောက်ရိုးဦးထုပ်တွေကို ရှောင်ပါ။
နေကာမျက်မှန်များ – နေကာမျက်မှန်တွေက သင့်မျက်လုံးတွေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မထိအောင် ကာကွယ်ပေးရုံတင်မကပဲ သင့်မျက်လုံးပတ်လည်က နူးညံ့တဲ့ အရေပြား ဧရိယာတွေကို နေမလောင်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည် ကာထားတဲ့ နေကာမျက်မှန်တွေက UVA နဲ့ UVB ကို ၁၀၀% နီးပါး တားဆီးပေးပါတယ်။ UVA ရော UVB ပါ တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ နေကာမျက်မှန်တွေက အကောင်းဆုံး အကာအကွယ်ကို ပေးနိုင်ပါတယ်။
သမားတော်အတော်များများက နေပူတဲ့ ဘယ်အချိန်ပဲ အပြင်ထွက်ထွက်၊ ဆောင်းဦး၊ ဆောင်းနှောင်း သို့မဟုတ် ကောင်းမွန်တဲ့ ရာသီဥတုမှာတောင်မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရေပြားကို ကာကွယ်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတာပါ။ နေလောင်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းအရာတွေကို သိထားခြင်းက သင့်ကို အရေပြားကင်ဆာအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ ရဖို့ ကူညီပေးမှာပါ။
Cosmetic Procedures: Sun Exposure and Skin Cancer. http://www.webmd.com/beauty/sun/sun-exposure-skin-cancer. Accessed September 19, 2016.
Ultraviolet (UV) Radiation. http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/radiationexposureandcancer/uvradiation/index. Accessed September 19, 2016.
How the sun and UV cause cancer. http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/sun-uv-and-cancer/how-the-sun-and-uv-cause-cancer. Accessed September 19, 2016.
Skin cancer risks and causes. http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/skin-cancer/about/skin-cancer-risks-and-causes. Accessed September 19, 2016